सर्जकचाहिँ ओझेलमै ! : RajdhaniDaily.com
Homeभर्खरैसर्जकचाहिँ ओझेलमै !
केही मानिस चिया चुस्कीसँगै गीत संगीतको आन्नद लिइरहेका छन् ।
यसबीच कसैले प्रश्न ग-याे ‘फलानो गीत कसको हो र ?’
उत्तरमा, ‘फलानो गायकगायिकाको, कस्तो मीठो गीत छ, मन छायो ।’
संवाद केही बेर पूर्णविराम लाग्छ । तर, मलाई एउटै कुराले झस्काइरह्यो । गायकगायिकाको नाममात्र किन, रचनाकार र संगीतकार खै ? अर्को पक्ष किन पछाडि ? सर्जक–स्रष्टा किन पाठक ? स्रोताको स्मृतिमा नरहेको होला र ?’ यद्यपि, गायकगायिकालाई स्रष्टाको सूचिमा भने राखिएको छैन । ‘प्रस्तोता’को कोटीमा राखिएका उनीहरूको हकहितका लागि प्रस्तोता समाजसमेत खडा गरिएको छ ।
सर्जकको अर्थ नयाँ कुराको सिर्जना गर्ने मान्छे हो । स्रष्टाले सिर्जना नगरेसम्म केही अगाडि बढ्न सक्दैन । सर्जकमा त्यो अनौठो शक्ति हुन्छ, जसले सुतेको मानिस उठाउन सक्छ । विसंगत संगीतमय बनाउन सक्छ । सर्जक र पानी उस्तै हुन् । पानीबाट बिजुली निकालेर भौतिक संसारलाई प्रकाश पार्न सकिन्छ भने सिर्जनाबाट मानसिक चिन्तनलाई ।
संसारमा गीतसंगीत मन नपराउने कमै होलान् । एकप्रकारको चुम्बकीय शक्ति हुन्छ, संगीतमा । तर, यहाँ चुम्बकीय शक्तिका सबै धुव्रको चर्चा हुँदैन । एउटै गीतले गायकगायिकाको छुट्टै पहिचान बन्छ । रचनाकार, संगीतकार र गायकको त्रिवेणी हो, गीत । लेखको आशय स्वरकर्मीलाई निरूत्साहित गर्नु होइन, ओझेल परेका स्रष्टालाई बाहिर ल्याउनु हो ।
पछिल्ला समय सिर्जना संख्यात्मक रूपले बढे पनि गुणस्तर खस्किएको सर्जकलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता आरोप निरूपण केही स्रष्टाले थेगेका छन् । उनैले सबैको हृदयमा राज गरेका छन् ।
एउटा गीत स्रष्टाले सिर्जना गर्छ, त्यसमा संगीतकारले प्राण भर्छ र त्यसअनुकुल गाइन्छ । गीतकार पहिलो, संगीतकार दोस्रो सर्जक हुन् । हामीमध्ये धेरैलाई कुनै गीतको गायकगायिका सजिलै थाहा हुन्छ तर गीतकार वा संगीतकारको नाम थाहा पाउन नेट ‘सर्च’ गर्नुपर्छ । रातो र चन्द्र सूर्य, गाउँगाउँ उठ, रेशम फिरिरि, गा“जलु ती ठूलाठूला आँखा, पूmलको आँखामा, ऋतुहरूमा तिमी, यहाँ देशको छ चिन्ताजस्ता गीतका स्वरकर्मी सँधै चर्चामा छन् । तर, गोपालप्रसाद रिमाल र अम्बर गुरुङ, बुद्विराम परियार र अर्जुन चैनपुरे, मविवि शाह र दीपक जंगम, दुर्गालाल श्रेष्ठ र न्हयू बज्राचार्य, राजेन्द्र रिमाल र राम थापा, कृष्णहरि बराल र सुरेश गैरे, स्रोताका मनमस्तिष्कमा अंकित छन् । श्रेय गीतकार र संगीतकारमै जान्छ । उल्लेखित गीतले सांगीतिक माहोल जर्जरबाट केही हद माथि उठायो पनि । यी नै गीतमार्फत थुप्रै गायकले आपूmलाई चिनाए । तर, तिनै गीतका लेखक र संगीतकार भने सधैं ओझेल पर्छन् । ‘यो गीत फलानो गायक हो’ भन्नुले कतिको औचित्य राख्ला ? अजरअमर गीतका सर्जक भने पर्दा पछाडि छन् ।
लेखक : सन्तोष कार्की
यी नै गीतले क्रमशः २००७, २०१७, २०३६, २०४७ र २०६३ मा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भए । समाजमा जागरण पैmलियो । महत्वपूर्ण योगदान दिने सर्जक पर्दाअगाडि ल्याउन राज्य निरीह लाग्छ ।
गायकगायिका सभा–समारोहमा गीत गाएबापत मनग्गे आम्दानी गर्छन् । उनीहरूले गाएर प्राप्त गरेको रकममा गीतकार र संगीतकारको अधिकार बञ्चित हुन्छ । प्रतिलिपि अधिकारसमेत यसमा गौण बनिदिन्छ । हातहातमा प्रविधि छ । यसबाट एकप्रकारले गीतसंगीत उज्यालोतर्फ डो-याएको पनि छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले गीतकार र संगीतकारको नाम राखेको पाइ“दैन । यसोगर्दा न त सृष्टाको सम्मान हुन्छ, न इतिहासको जानकारी नै । त्यतिमात्र नभएर एउटाको गीत अर्काको भनी लेख्ने गरेकोसमेत पाइन्छ ।
गीतकारको हकहितमा खुलेको संस्था गीतकार संघको ध्यान जरुरी देखिन्छ । सर्जकलाई सधैँ रद्दिको टोकरीमा ङ्खया“किएका मालसमानजस्तै बनाइन्छ । एउटी आमाले जसरी आप्mना सन्तानलाई प्राणभन्दा प्रिय नै ठान्छिन्, त्यसरी नै सर्जकका सिर्जना हुन्छन् । तर, यहाँ कतिपयले मूल स्रष्टाका सिर्जनाको भावहरण गरेका दृष्टान्तसमेत छन् ।
केही म्युजिक कम्पनीले एउटाको गीत अर्काको नाममा राखिदिने गरेका वा मूल सृष्टाको नाम हटाइदिने गरेका घटना प्रशस्तै छन् । प्रतिलिपि अधिकार कार्यान्वयन यसरी चुकिरहेको छ । सर्जकको नाम उल्लेख गर्न पाउँदा गर्व गर्न सक्नुपर्ने विषयमा हिचकिचाहट प्रवृत्ति बढिरहेको छ । सर्जक सधैं मार्कामै छन् । विज्ञान र प्रविधि प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा साहित्य पनि त्यसको पछि लागिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्रष्टाका सिर्जना राख्दा सर्जकले कतिसम्म लेखकस्व वा रोयल्टी पाए ? भन्ने हरहिसाब पारदर्शी छैनन् । एकातर्फ रोयल्टी संकलन समाज, लोकदोहरी प्रतिष्ठान, गीतकार संघ नेपालले सर्जकको हकअधिकारबारे पर्याप्त कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातर्फ सरकारको नजर यसतर्फ परेकै छैन ।
अहिले नेपाली गीतसंगीत एकाधबाहेक धेरैजसो बजार मागको दौडमा छन् । यस्ता दौडको गन्तव्य निकै छोटो हुन्छ । गीत मानिसको जीवन भोगाइ, अनुभूति छुनसक्ने हुनुपर्छ, जुन जीवन्त बन्न सक्छ । पछिल्ला समय सिर्जना संख्यात्मक रूपले बढे पनि गुणस्तर खस्किएको सर्जकलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता आरोप निरूपण केही स्रष्टाले थेगेका छन् । उनैले सबैको हृदयमा राज गरेका छन् । साहित्य सिर्जना गर्न प्रतिभा, व्यूत्पति र अभ्यास चाहिन्छ । यतिबेला सबै सर्जक बन्ने होडबाजीमा होमिएको देखिन्छ । साहित्यले समाज सुधार गर्न सक्नुपर्छ । नत्र, त्यो साहित्य बन्न सक्दैन ।
सर्जक नाममा विश्वमा विभिन्न स्कुल, कलेज र स्थल नामकृत छन् । पाश्चात्य समाजमा सर्जकलाई विशिष्ट स्थानमा राखिन्छ । नेपालमा भने त्यसको अभ्यास ज्यादै कम छ । राष्ट्रका उच्चपदस्थले पदमा रहँदामात्रै होइन, पदमुक्त हुँदासमेत लाखौंको सेवा सुविधा भोग गर्ने थिति बसेको छ । तर, संसार चिनाउने सर्जक भने सधैं छायाँमै छन् ।
गरिवका लागि एलिजाले ७७० वटा घर बनाइदिने
काठमाडौं । नायिका एलिजा गौतमले गरिव एवं असहायका लागि मुलुकभर ७७० वटा घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । एलिजा फाउण्डेशन स्थापना गरेर सामाजिक काम...
सप्तरीमा संक्रमण पुष्टि भएको दुई घण्टा नबित्दै महिलाको मृत्यु
अमेरिकाबाट प्रदर्शन थालियो ओभरडोज
हिन्दी गीतमा नेपाली माेडलले गरिन् अभिनय
प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलाश गठन गर्ने घोषणा, अर्काे इजलाश अब २३ गते